लेनोभो Vibe S1, हामीले भिडियोमा परीक्षण गर्नुभयो Androidsis
सेल्फी लिने फेसनमा छ। सेल्फीको फेसन समाप्त हुँदैन जस्तो देखिन्छ र त्यसैले निर्माताहरूले यस प्रकारका फोटोग्राफीमा फोन उन्मुख फोन खोजिरहेका ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि समाधान प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। Y यसको Vibe S1 को साथ लेनोवो विचार गर्न उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो।
र यो यो हो कि निर्माताले यसको साथ चकित भयो लेनोभो Vibe S1, एक फोन जुन प्रोसेसिंग सफ्टवेयरको साथ यसको डबल फ्रन्ट क्यामेराको लागि बाहिर खडा हुन्छ जसले सेल्फीहरूलाई प्रेम गर्दछ। के तपाइँ हाम्रो भिडियो विश्लेषण याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
1 लेनोवो Vibe S1 को प्राविधिक विशेषताहरु
2 तपाईंको फ्रन्ट क्यामेराको सम्भावनाहरूको पूर्ण फाइदा लिन डिजाइन गरिएको सफ्टवेयर
लेनोवो Vibe S1 को प्राविधिक विशेषताहरु
143.36 मिमी x 70.8 मिमी x 7.8 मिमी
स्क्रिन 5.0 इन्च 1920 1080 441 रिजोलुसन र XNUMX dpi साथ
GPU एआरएम माली T-760 MP2
अगाडिको क्यामरा २० र १ me मेगापिक्सल
ब्याट्री2500 mAh
तपाईंको फ्रन्ट क्यामेराको सम्भावनाहरूको पूर्ण फाइदा लिन डिजाइन गरिएको सफ्टवेयर
लेनोभो Vibe S1 को विश्लेषणको साथ भिडियोमा तपाईले देख्नु भएको छ कि यस फोनको सब भन्दा उल्लेखनीय बुँदा भनेको यसको डबल फ्रन्ट क्यामेरा हो। यस प्रणालीको क्षमताहरूको पूर्ण लाभ लिन, लेनोभो सँग इन्टिग्रेटेड प्रोसेसिंग सफ्टवेयर छ जुन तपाइँले फोटोको विभिन्न पक्षहरू छिटो र सजीलो रूपमा सम्पादन गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
प्रणाली यसले मलाई Honor6Plus को एक धेरै याद दिलाउँछ, जसले तस्वीरहरू सम्पादन गरिसके पछि महान सम्भावनाहरू प्रदान गर्‍यो। नयाँ र चाखलाग्दोलाई अझ राम्ररी परिक्षण गर्नुपर्नेछ डुअल फ्रन्ट क्यामेरा फोन लेनोभोबाट किनकि, हामीले पहिले गरेका प्रभावहरू बढी सकारात्मक हुन सक्तैनन्।
र तपाइँलाई, तपाइँ लेनोभो Vibe S1 को बारे मा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » लेनोभो » लेनोवो Vibe S1, सेल्फीका प्रेमीहरूको लागि डिजाइन गरिएको फोन
मार्क जुकरबर्गले फेसबुकमा थपिएको "मन नपर्ने" बटनको घोषणा गर्नुभयो